Sunday April 07, 2019 - 08:58:22 in Wararka by Super Admin
Maleeshiyaadka Ashahaadda ladirirka ah ee loo yaqaan Bangaraafta Mareykanku tababaray ayaa maanta xoog ku galay masjidka Abaa Hureyra ee kuyaal gudaha suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dhibaateeyeen jamaacadii ku cibaadeysanayay.
Goob jooge ka badbaaday howlgalkaas raafka ah oo ay sameeyeen maleeshiyaadka Bangaraafta dowladda Federaalka ayaaSomaliMeMou sheegay in maleeshiyaadkan ay dhibaata xooggan ugeysteen dadkii ku dukanayay masjidka sida iyagoo ehaaneeyay islamarkaana Jirdil iyo aflagaaddo ugeysanayay.
"Ciidamo wajiyadu uduubanyihiin ayaa Masaajidka Abaa Hureyra soo galay, si xun ayay ula dhaqmeen muslimiintii gudaha masjidka ku tukanayay qaar badan oo kamid ah waxay dhaheen darbiga madaxa saara, caay iyo aflagaado ayayna noo geysteen Alle mahaddii aniga iyo dad kale waa ka badbaadnay shartooda balse imaamkii masjidka iyo dad badan ayay qafaasheen" ayuu yiri qof ka bad baaday raafkii Masaajidka.
Macalin Cabdiraxmaan Guure oo ahaa Imaamka Masjidka Abaa Hureyra iyo tobanaan kamid ah jamaacada Masjidka ayay ciidamada dowladda xireen waxayna udhaadhiciyeen dhanka xabsiyo qarsoodi ah oo kuyaal dhanka madaxtooyada Villa Somalia.
Falalkan gabood fallada ah ayaa qeyb ka ah dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo shacabka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka Banaadir, dhinaca kale ugu yaraan 23 qof oo ubadan dhalinyaro wax ka baranaysay madaarista diiniga ah ayay ciidamada Booliska dowladda Federaalka saacadihii lasoo dhaafay ka qabqabteen deehaanka Ceelasha Biyaha ee dhaca galbeedka Muqdisho.